Waxyaabaha ugu fiican ee Android 11: Sida Loogu Helo Taleefan Kasta 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sida sanad walba Google u cusbooneysiiso nidaamkeeda hawlgalka Android soo bandhigida hal-abuurnimo badan oo xiiso leh iyo hagaajinta dhammaan howlaha lagu arkay sii-deyntii hore, si loo qaato khibrada isticmaale heer cusub oo loola dagaallamo shuruudaha loo siman yahay qofka la tartamaya waqtiga oo dhan, iOS. Nidaamka tixraaca ee iPhones iyo tartan sii kordheysa sidoo kale dhinaca qaabeynta).
Haddii aanan awoodin inaan isku dayno Android 11 isla markiiba oo aan aad u xiiseyneyno nooca cusub, waxaad u timid hagaha saxda ah - halkan waxaan ku tusi doonaa runtii. astaamaha ugu wanaagsan ee lagu soo bandhigo Android 11 iyo, si aan uga dhigno mid dhameystiran, waxaan sidoo kale ku tusi doonaa sida looga helo isla qaababka casriga casriga ah ee Android, markaa uma baahnid inaad iibsato gen-ka soo socda ee Google Pixel ama aad sugto Android 11 inay ku timaaddo taleefannada dhinac saddexaad.
AKHRISO: Ku rakib Android 11 Windows 10
Tilmaamaha Tilmaamaha Android 11
Sida ku xusan hordhaca, cutubyada soo socda waxaan ku tusi doonaa maxay yihiin hal-abuurnimada muhiimka ah ee laga heli karo nooca 11 ee nidaamka hawlgalka Android iyo muuqaal kasta waxaan sidoo kale ku tusi doonaa sida looga helo taleefannada casriga ah ee Android ugu yaraan leh nooca 7.0.
Oggolaanshaha ku meel gaarka ah ee codsiyada
Ka mid ah hal-abuurnimada ugu muhiimsan ee amniga ee Android 11, ayaa ruqsadaha ku meel gaarka ah- Marka codsi na weydiisto rukhsad, waa la siin karaa si ku meelgaar ah illaa inta codsigu xirmayo; tan ayaa noo oggolaan doonta siiyaan rukhsad aad u muhiim ah oo keliya muddo gaaban, cabsi la'aan in dalabku dib u isticmaali karo markii aan la isticmaalin ama ka dib muddo dheer oo hawl ah.
Haddii aan dooneyno inaan ku soo bandhigno shaqadan Android kasta oo casri ah (oo la sii daayay 2 ama 3 sano ee la soo dhaafay iyo Android 7 ama ka sareeya) si fudud u soo dejiso arjiga Xoogsheegasho, oo laga heli karo bilaash Google Play Store isla markaana awood u leh inuu gabi ahaanba beddelo nidaamka rukhsadda ee lagu dhisay Android, si loo awoodo in la bixiyo rukhsado ku meelgaar ah oo la beddeli karo (sidoo kale waxaan ku siin karnaa rukhsad wakhti cayiman, sidoo kale waxaan kuu xaddidi karnaa inaad xirto dalabka).
Imisa jeer ayey nagu dhacday inaan xirno ogeysiis si qalad ah oo aanan fahmin barnaamijka uu u jeedaa? In Android 11 dhibaatadan waa laga adkaaday, maadaama ay jirto mid la heli karo taariikhda ogeysiisyada ee ka muuqday taleefanka, sidaa darteed waxaad had iyo jeer aqoonsan kartaa ogeysiiska dalabka ama aad fahmi kartaa farriinta aan la aqrin.
Si aad awood ugu yeelatid inaad dhexgashid taariikhda ogeysiiska ee casriga casriga ah ee Android, si fudud u soo dejiso arjiga Ogeysii mas'uulka, oo laga heli karo bilaash Google Play Store oo awood u leh soo bandhigida muuqaalkan xitaa taleefannada duugga ah (taageerada ugu yar waa Android 4.4).
Iyadoo Android 11 aan ugu dambeyntii awoodno duub wax kasta oo ka dhaca shaashadda taleefankayaga (si loo abuuro hagitaano loona bixiyo caawimaad) iyadoo ay suuragal tahay sidoo kale wuxuu ku duubayaa codka makarafoonka la dhisay, markaa uma baahnid inaad isticmaasho codsiyada dhinac saddexaad.
Tan iyo ilaa iyo Android 10 shaqadan waxaa laga heli karaa oo keliya arjiga, waxaan helnay waxyaabo kale oo badan oo lagu duubo shaashadda xitaa taleefannada duugga ah; tan waxaan kugula talineynaa inaad soo dejiso arjiga AZ taariikhqorihii shaashadda, oo laga heli karo bilaash Google Play Store.
Bolle per le chat (goobooyin lagu sheekeysto)
In Android 11, mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Facebook Messenger ayaa lagu soo bandhigay heerka nidaamka, oo ah goobooyin lagu sheekeysto (Goobooyin wada sheekeysi ah); iyaga ayaynu ku kari karnaa hel ogeysiisyo ugana jawaab sheekaysiga inta aad isticmaaleysid barnaamij kalemaaddaama ay u muuqan doonaan sida goobooyin is dul saaran (guji si looga jawaabo).
Haddii aan rabno inaan adeegsigaan ugu adeegsanno taleefannada casriga ah, kaliya isticmaal Facebook Rasuulka (bilaash ayaa laga heli karaa Google Play Store) ama, haddii aan dooneyno inaan ku kordhinno dhammaan codsiyada, ku kalsoonow codsi sida DirectChat, sidoo kale waxaa laga heli karaa bilaash Google Play Store.
Xakamaynta warbaahinta badan
Waxyaabaha cusub ee loo yaqaan 'Android 11' waxaan sidoo kale ka helnaa nidaam cusub oo lagu xakameynayo codsiyada multimedia: markaan furno Spotifty, YouTube ama barnaamijyo la mid ah Daaqad hubin deg deg ah oo toos ah uga timaadda hoos u dhigista Android, oo ku xigta goobaha degdegga ah.
Waxaan ku soo bandhigi karnaa shaqadan casriga casriga ah ee Android adoo ku rakibaya codsi sida Hooska awoodda, oo laga heli karo bilaash Google Play Store oo awood u leh inay bixiso ugu badnaan u habeyn loogu talagalay ogeysiiska iyo shaashadda oo leh dariiqyo dhakhso leh.
Qorshee hab mugdi ah
In kasta oo shaqadani aysan ahayn wax ugub ah (waa la joogaa tusaale ahaan jiilka cusub ee Samsung), Google sidoo kale waa la qabsatay oo leh Android 11 ayaa kuu oggolaanaysa jadwalka ka shaqeynta qaabka mugdiga ama qaabka mugdiga ah, si aad u hawl galin karto habeenkii ama wakhti kasta oo kale oo maalintii ah
Barnaamijyo badan ayaa horeyba kuu oggolaaday inaad qorsheyso qaab mugdi ah (ama xaalad mugdi ah), sida sidoo kale lagu arkay hagaha Sida loo kiciyo habka mugdiga ah ku saabsan barnaamijyada Android iyo iOS; laakiin haddii aan dooneyno inaan u qorsheyno qaabkan nidaamka oo dhan, waxaan ku kalsoonaan karnaa codsi sida Hab madow, oo laga heli karo bilaash Google Play Store.
In kasta oo astaamahani ay nasiib u yeelan doonaan Pixels-ka cusub iyo dhammaan aaladaha yeelan doona Android 11 oo ah nidaam hawlgal ah, macnaheedu maaha in dadka isticmaala noocyadii hore ee Android ay tahay in looga tago! Barnaamijyada aan kugula talinay, waxaan si fiican uga faa'iideysan karnaa astaamaha ugu xiisaha badan ee Android 11 adigoon iibsan Google Pixel ama taleefan jiil cusub oo wata Android 11 oo lagu daray.
Haddii aan dooneyno inaan helno Android 11 cusub qiime kasta, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad aqriso hagayaasheena Cusbooneysiinta Android: yaa ka dheereeya Samsung, Huawei, Xiaomi iyo soo saarayaasha kale? mi Hubi cusbooneysiinta taleefannada Huawei, Samsung iyo Android.
Better PC ama PS5 / Xbox taxane ah oo la ciyaaro?